एडोब क्रिएटिव्ह क्लाउड: इजाजत पत्रमा राम्रो प्रिन्ट पढ्नुहोस्! | Martech Zone
जब एडोब क्रिएटिव्ह क्लाउड सुरू भयो, मैले साइन अप गरें! कुनै अधिक महँगो लाइसेन्स खरीदको छैन र डीभीडी कुञ्जीहरू प्रबन्धन गर्दै ... केवल डाउनलोड गर्नुहोस् र आवश्यकता अनुसार स्थापना गर्नुहोस्। हामीसँग एक अद्भुत टोली छ जुन हाम्रो डिजाइनहरूमा काम गर्दछ, तर हामीले प्राय: द्रुत सम्पादन वा समायोजन गर्नु पर्दछ जब हामी हाम्रा डिजाइनरहरूबाट फाईलहरू प्राप्त गर्छौं, त्यसैले मैले लाइसेन्स खरीद गरें। मेरो व्यापार पार्टनरले सहयोग गर्न शुरू गरे, त्यसैले मैले उनको लागि दोस्रो लाइसेन्स पनि किनें। र तब हाम्रो ग्राहकहरु मध्ये एकको इजाजतपत्रको लागि बजेट थिएन तर समय समयमा फाईलहरू सम्पादन गर्नु आवश्यक पर्‍यो, त्यसैले मैले तिनीहरूको लागि इजाजतपत्र खरीद गरें।
मैले कहिल्यै राम्रो प्रिन्ट पढिन
मैले सोचेँ कि म भर्खर मासिक इजाजतपत्र शुल्क तिर्दै छु र आवश्यक छ र लाइसेन्स हटाउन र हटाउन सक्छु। मैले कठिन मार्ग पत्ता लगाए जुन त्यो केस हैन। मेरो व्यवसाय पार्टनरले उनको आफ्नै एजेन्सी सुरु गरेपछि र मेरो ग्राहकले कर्मचारीलाई छोडेको थियो ... मैले आफूलाई प्रत्येक महिना दुई प्रयोग नगरिएका इजाजतपत्रहरूको लागि भुक्तानी गरेको पाए। एडोब क्रिएटिव क्लाउडको लागि भयानक प्रशासनिक प्यानलमा ठोकर खाए पछि र ती दुई प्रयोगकर्ताहरूलाई हटाए पछि, मैले यो याद गरें कि लाइसेन्स गणना समान नै छ।
तिनीहरूको ज्ञानको आधारमा "लाईसेन्स हटाउनुहोस्" को लागी द्रुत खोजले प्रतिक्रिया प्रदान गर्‍यो कसैले पनि कहिल्यै चाहँदैन… समर्थन समर्थन गर्नुहोस्। उह ... मैले च्याट विन्डो खोलेँ। मलाई लाग्यो कि कसैले मलाई इजाजतपत्र असक्षम गर्दैमा कुरा गर्ने होला। २ 23 मिनेट र seconds१ सेकेन्ड पछि, तिनीहरूले गरे। तर यो तपाईको सोचाइमा नहुन सक्छ।
वास्तविक च्याट माथिको सम्मिलित छ जुन तपाईंलाई फ्याँकिएको मूर्खतापूर्ण पिच देखाउनका लागि हो, जसले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्यो कि म मेरो इजाजतपत्र प्रयोग गर्दैछु भन्ने तथ्यलाई। मलाई थाहा छ प्रोग्राम कति महान छ, म लाइसेन्स किन्नुभयो!
एक कम्पनी एडोबको आकार ईमानदारीसाथ लज्जित हुनुपर्छ यो रणनीति प्रयोग गरेर केहि ग्राहकहरूको लागि पैसा काट्ने। मैले महसुस गरेन कि म अनजाने एक नयाँ वार्षिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै थिएँ। मँ बुझ्छु केहि ब्यापारको कडा ग्राहकहरु संग जहाज मा लागत छ, तर त्यो Adobe Creative Cloud संग अवस्थित छैन। कुनै पनि अन्य सास प्लेटफर्मको साथ, म आवश्यक पर्दछ र प्रयोगकर्ता लाइसेन्स हटाउन सक्षम हुनुपर्दछ। मैले साइन अप गर्नुको कारण यो हो कि म एक इमान्दार प्रयोगकर्ता हुँ जसले प्लेटफर्मको मूल्यलाई सराहना गरे र स्वेच्छाले यसको लागि भुक्तान गरे।
अब म Adobe Creative Suite को लागी अन्य दुई इजाजतपत्र निष्क्रिय संग मेरो लाइसेन्स लागत को license००% तिर्दै छु। एडोब, म तपाईंलाई बिलकुलै जुलाई १ 300, २०१ calling मा कल गर्दैछु। हुनसक्छ यो समय मेरो लागि वैकल्पिक प्लेटफर्महरू फेला पार्ने हो।
चेतावनी: प्रशासकीय प्यानलमा स्वत: नवीकरण असक्षम गर्न विकल्प पनि छैन।
टैग: एडोबएडोब रचनात्मक बादलएडोब रचनात्मक सुटएडोब लाइसेन्सिंगरचनात्मक क्लाउडइजाजत पत्र